Mpamatsy sy Kitapom-bolan'ny kabinetra - Mpanamboatra Rafitra Kabine ao Shina
Fonosana Elevator azo hatsaraina ara-pahasalamana, ara-tontolo iainana ary tsara tarehy
Ny fiaran-dalamby Tianhongyi dia toerana fitobiana boaty hitondrana sy hitaterana mpiasa sy fitaovana. Ny fiara dia mazàna dia misy fefy fiara, tampon'ny fiara, ambany fiara, rindrin'ny fiara, varavarana fiara ary singa lehibe hafa. Ny valindrihana dia matetika vita amin'ny vy tsy misy fangarony; ny ambany fiara dia 2mm matevina marbra PVC gorodona gorodona na parety marbra 20mm matevina.
Fonosana ambony sy avo ary samihafa izay afaka mamaly ny filàna rehetra
Ny fiara dia ampahany amin'ny vatan'ny fiara ampiasain'ny ascenseur hitondrana mpandeha na entana ary entana hafa. Ny vodin'ny fiara ambany dia lasakan'ny takelaka vy, ny vy amin'ny fantsom-by ary ny vy fieren'ilay maodely voatondro sy ny habeny. Mba hisorohana ny vatan'ny fiara tsy hihontsona, matetika ampiasaina ny andry eo ambanin'ny endriny.
Rindrambaiko avo lenta ho an'ny tahan'ny fifandanjana samihafa
Ny endriny counterweight dia vita amin'ny vy fantsona na lovia vy 3 ～ 5 mm miforitra miendrika vy fantsona ary atsofoka amin'ny lovia vy. Noho ny fotoana fampiasana samihafa dia tsy mitovy ihany koa ny firafitry ny refin'ny counterweight.
Counterweight amin'ny Elevator Miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany
Ny counterweight an'ny ascenseur dia napetraka eo afovoan'ny frame counter elevator mba hanitsiana ny lanjan'ny counterweight, izay azo ampitomboina na hihena. Ny endrik'ilay counter counter elevator dia cuboid. Aorian'ny fametrahana ny vato vy mavesatra dia apetraka ao anaty vatan'ny mpanohitra, mila tsindriana mafy amin'ny takelaka faneriterena izy io mba hisorohana ny ascenseur ary hiteraka tabataba mandritra ny fiasa.